Torohevitra 21 sy tetikady AirPods Pro Tokony ho Fantatrao - Accessories
Apple dia nanangana ny AirPods Pro tamin'ny faran'ny volana oktobra 2019, ary tao anatin'ny herintaona dia nanjary nalaza be izy io ary lasa fanambarana ny fironana. Miaraka amin'ny fahombiazan'ny, endri-javatra, ary ny fomba AirPods Pro dia nanjary sandan'ny vola tao anatin'ny $ 250 avy amin'ny magazay Apple ary $ 200 tany amin'ny tsena hafa. Izahay dia manome anao ny sasany amin'ireo toro-hevitra tsara indrindra amin'ny AirPods sy ny tetika mba hahazoana antoka fa tsy diso ny iray amin'ireo fiasa ao amin'ilay fitaovana.
Ireto misy sasany amin'ireo fiasa tsara indrindra amin'ny AirPods sy izay azon'izy ireo atao:
Fanafoanana ny tabataba mahery vaika ho an'ny feo miroboka
Fanamorana mety azo aroso fampiononana feno
Fiainana bateria izay manome anao 4,5 ora hihainoana adiny iray fotsiny sy 1 ora fihainoana ao anatin'ny 5 minitra fotsiny, eny, henonao (vakio) tsara izany!
Ary maodely fampiononana hafa.
Saingy ho an'ny olon-tsotra fotsiny ireo fika sy fiasa AirPods Pro ireo, raha eto ianao mamaky ny lahatsoratray dia mendrika hahalala bebe kokoa ianao.Ankehitriny, andao hikaroka sy hamantatra izay azon'ny AirPods Pro atao bebe kokoa.
Torolàlana ho an'ny AirPods misimisy:
Amboary ny tranga AirPods fa tsy mamaly
Torohevitra sy tetika AirPods Pro 21 - Tsy maintsy jerena
1. Ny endri-javatra ‘Spatial Audio’
Ny AirPods Pro dia manana endrika tena miasa sy malaza, antsoina hoe 'audio spatial'. Ity endri-javatra ity dia miasa rehefa mijery horonantsary na sarimihetsika amin'ny apple tv ianao na fampiharana hafa, ary rehefa apetrakao ao amin'ny AirPods Pro ianao dia hivezivezy ao an-tsofinao ilay feo araka ny seho an'ity horonan-tsary ity na ny lalana ahodinanao ny midira ary hahatsapa fa ny feo dia mihazakazaka lavitra ny sofinao.
Tahaka ny nieritreretan'i Apple fa andao hitondra ny mazika 3D ho an'ny sarimihetsika 2D anao koa. Asa tsara Apple!Mba hahatsapana ny majika an'ity endri-javatra ity dia mila manavao ny iOS 14 amin'ny iPhone ianao. Raha te hampandeha azy dia sokafy ny menio Settings ao amin'ny iPhone anao> kitiho ny safidin'ny Bluetooth> kitiho ny kisary 'i' eo ​​akaikin'ny AirPods Pro> atsofohy ny switch eo akaikin'ny 'audio spatial'.
2. Mode fanafoanana ny tabataba
Moa ve ianao mipetraka ao amin'ny cafe na any amin'ny biraonao ary manandrana miasa mafy fa ny fidoboky ny fifamoivoizana na ny fifosana tsy misy fetra avy amin'ny vondrona eo akaikinao dia mitobaka ao an-tsofinao ary ny hany fanirianao dia ny hangina ny vavany.Apple nandre anao ary nametraka maody Cancellation Noise tao amin'ny AirPods Pro anao manokana.
Eny, ny hany mila ataonao dia ny manindry lava amin'ny AirPod na swipe havanana ny afovoany fanaraha-maso eo amin'ny fitaovanao> tsindrio lava ny bokotra volume> hiseho ireo safidy telo amin'ireo maody hita ao amin'ny AirPods Pro> safidio ny safidy fanafoanana Noise avy any.
Taiza ianao izao Apple?
3. Maody mangarahara
Ny fomba fanafoanana ny tabataba dia tonga lafatra fotsiny, ekeko, fa ahoana raha any amin'ny toerana tsy tianao hihainoana hatrany ireo hiranao / podcast / antso ianao nefa mila manara-maso (sofina) hatrany amin'ireo feo ao ambadika, toy ny rehefa eo am-panaovana izany ianao. fiaramanidina na mandeha amina arabe.
Ny AirPods Pro anao dia nahatonga anao ho voaro ihany koa eto. Tsindrio lava fotsiny ny AirPod na swipe havanana ny afovoany fanaraha-maso eo amin'ny fitaovanao> tsindrio lava ny bokotra volume> safidy telo amin'ireo maody misy ao amin'ny AirPods Pro anao hiseho> misafidy maody Transparency avy eo.
4. Fehezo amin'ny tehina AirPod ny mozikao
Ny karazana earbuds na headphone hafa rehetra dia misy bokotra eo amin'ny tsorakazo na ny fotony hitendrena na hiatoana ny mozikao, sns. Fa ny AirPods Pro anao dia be mpitia noho io.AirPods Pro dia tsy manana bokotra akory fa manana fahatsapana mikasika / tsindry natsangana tao amin'ilay fotony. Tsindrio fotsiny na potserinao ny indentation fisaka amin'ny AirPod tsirairay avy dia handrenesanao tsindry isaky ny press ianao.
Ity no dikan'ny gazety tsirairay
Gazety tokana- miato / mitendry mozika
Tsindrio indroa- mandroso
Gazety telo- miverina mihemotra
Gazety lava- mifamadika eo amin'ny fanafoanana ny tabataba sy ny fomba mangarahara (ireo noresahintsika tetsy ambony ireo)
Vao niresaka momba ny dikan'ny gazety tsirairay eo amin'ny vatan'ny AirPod ianao, avelao izahay hilaza aminao ny fomba hanamboarana azy bebe kokoa.Ovay ny hafainganam-pandeha ilaina mba hiasan'ny asa fanaovan-gazety amin'ny alàlan'ny sehatranao Sokafy ny fikirana ao amin'ny telefaoninao> kitiho ny fidirana an-tserasera> safidio AirPods> ankehitriny amboary ny hafainganana sy ny faharetany.
5. Feo mihaino mivantana
Inona no mety ho mahatalanjona kokoa noho ny Apple mamela ny endri-javatra iray manampy anao hisintona. Ok, tsy amin'ny fomba ofisialy fa azonao ampiasaina koa izany.Ka izao no ataon'ny seho Live Listen. Rehefa alefa ny iPhone / fitaovana ampiasainao toy ny mic ary ny zavatra rehetra miresaka eo akaikiny dia re ao amin'ny AirPods Pro. Mahafinaritra, marina?
Raha te-handrehitra azy io dia mandehana any amin'ny fikiranao iPhone> tsindrio ny foibe fanaraha-maso> safidio ny fanaraha-maso ampanjifaina> kitiho ny marika '+' eo akaikin'ny fitaovam-pandrenesana hanampiana azy amin'ny foibe fanaraha-maso anao. Apetraho amin'ny AirPods anao> sokafy ny ivon-toerana fanaraha-maso> tsindrio ny kisary mba handrenesana> eo am-baravarankely fihainoana, kitiho ny fidirana hihainoana mivantana> apetraho eo akaikin'ny olona tianao ho re ny findainao.
Ary ankehitriny ianao dia afaka mandre ireo feo voaray avy amin'ny mikroponinao iPhone, ao anaty AirPods Pro anao mihitsy.
6. Ny endri-javatra fampiantranoana finday ao amin'ny iOS 14
Ny endri-javatra fampiantranoana finday dia manampy anao hampiakatra feo malefaka kokoa ary hampiova fihenam-bidy matetika isaky ny fepetra takiana amin'ny fihainoanao sy fampiononana anao hahatonga ny AirPods Pro ho anao manokana.
Mandehana any amin'ny setting> tsindrio azo idirana> fidio audio / visual> misafidiana fonenana headphone, hamadihana ilay fampiasa.
7. Ovao iray fotsiny amin'ireo AirPods ho micro
Amin'ny toerana misy anao, ny AirPods anao roa dia samy manana mikrô natsangana izay manampy anao amin'ny fanomezana baiko an'i Siri na hiresaka amin'ny antso an-tariby.Fa raha heverinao fa ny iray amin'ireo AirPod anao dia miasa ho microphone, fantatrao ny mifantoka amin'ny lafiny iray fotsiny rehefa miresaka ianao na noho ny antony hafa, dia azonao atao izany amin'ny fanarahana ireo dingana nomena.
Sokafy ny fikirana telefaona> safidio Bluetooth> kitiho eo amin'ny kisary fampahalalana AirPods> safidio microphone> ovao ny mandeha ho azy.
Te hahafantatra iza no miantso nefa tsy mikasika ny telefaona?
Marary ve ianao amin'ny fampijanonana ny fiara amin'ny sisiny, hatrany hatrany, mba hijerena hoe iza no miantso, mieritreritra fa mety ho zava-dehibe izany ary isaky ny mivadika spam izany?
Mialà sasatra, nofononinay ianao.Sokafy ny toe-telefaonin'ny telefaona> safidio ny telefaona> izao eo ambanin'ny lohateny antso> tsindrio ny antso an-tariby> safidio ny headphone fotsiny.
8. Mampavitrika Siri amin'ny alàlan'ny AirPods
Ny fametrahana fanontaniana avy amin'i Siri dia mora kokoa izao satria izao dia azonao atao ny mampavitrika an'i Siri avy amin'ny AirPods anao.Lazao fotsiny hoe 'Hey Siri' na antsoy Siri amin'ny alàlan'ny AirPods Pro anao amin'ny alàlan'ny fanindriana sy fitazonana ny sensor an'ny Force amin'ny iray amin'ireo tahiry AirPod Pro.
9. Alefaso eo anelanelan'ny maody amin'ny Apple Watch anao
Tsarovy ny fomba niresahanay momba ny fomba mahafinaritra amin'ny AirPods Pro amin'ireo teboka etsy ambony ireo. Ity misy tetika mifandraika amin'izany.Ankehitriny ianao dia afaka mihodina eo anelanelan'ny mode 'Noise Cancellation' na ny mode 'Transparency' na mamono azy amin'ny Apple Watch anao koa.Eo am-pihainoana audio amin'ny alàlan'ny famatrehanao dia kitiho ny kisary AirPlay> kitiho ny 'Noise Cancellation', 'Transparency' na 'off'.
10. Raiso ny fitsapana amin'ny tendron'ny tendron'ny sofina
Efa fantatrao fa ny AirPods Pro dia miaraka amina tendron'ny toro-hevitra telo amin'ny sofina. Kely, salantsalany ary lehibe (esory ny sisin'ny tendron'ny sofina ary ho hitanao ny anaran'ny habe voahidy ao anatiny akaikin'ny fotony), raha efa tafiditra ao amin'ny AirPods Pro ny eo afovoany dia azonao atao ny manova mora foana ny toro-hevitra amin'ny sofina araka ny fampiononana.
Hainao ny manova tendron'ny sofina, marina? Mora izany, esory mafy fotsiny ny tendron'ny sofina avy ao amin'ny AirPod ary rehefa te-hametaka iray hafa ianao, dia ampifanaraho amin'ny mpampitohy boribory ary atosohy mandra-mahenoanao hoe tsindrio izany.Eritrereto hoe tsy azonao antoka ny fomba fanamafisana raha io no tendron'ny sofina havanana ho an'ny sofinao, dia azonao atao foana ny mandray ny fitsapana Ear Tip Fit ho an'ny AirPods Pro anao.
Ataovy ao anaty AirPods anao> mandehana any amin'ny fikirakiran'ny telefaona> safidio Bluetooth amin'ny fitaovan'ny iOS anao> kitiho ny bokotra 'i' eo ​​akaikin'ny AirPod Pro anao avy amin'ny lisitry ny fitaovana> kitiho ny 'Test Fit Tip Ear' (raha tsy hitanao ny ' Ear Fit Tip Test ”dia mety noho ianao manana kinova alohan'ny iOS 13)> paompy amin'ny tohiny> kitiho ny bokotra filalaovana.
Ny mety hitranga dia mety mifanaraka amin'ny habe samihafa ny AirPods anao. Toy izany ny vatan'olombelona.
11. Zahao ny baterian'ny AirPod avy amin'ny iPhone
Azonao atao ny mijery hatrany ny haavon'ny batterin'ny AirPods anao mba tsy ho lany bateria ianao eo afovoan'ny toetranao mozika.Apetraho ao anaty boaty fiampangana ny AirPods Pro anao ary sokafy eo akaikin'ny fitaovana ilay tranga. Haseho ny sary mihetsika mampiseho ny isan-jaton'ny bateria.Na azonao atao foana ny manontany an'i Siri momba ny haavon'ny batterin'ny AirPods anao.
12. Ovao ny maody avy amin'ny fitaovana Mac
Ny Airpods Pro dia mamela anao hanova ny maodelinao tsy ho mora amin'ny fitaovana Mac koa. Ny fepetra dia ny tokony havaozina ny laptop-nao amin'ny macOS Big Sur.Vantany vao vonona amin'ny fanavaozana ianao dia tsindrio ny kisary AirPod> safidio ny maody switch.
Na tsindrio ny bokotra fanaraha-maso ny habetsahana (hita eo amin'ny tsipika menio)> karohy ny AirPods Pro ao amin'ny menio mitete-mitete> izao dia afaka mihodina mora foana ianao eo anelanelan'ny maody (ny mode fanafoanana ny tabataba, ny maody mangarahara, ary ny maody off)
13. Tehirizo ny fiainanao bateria AirPod Pro
Fantatro amin'ny torohevitra sy tetika rehetra noresahintsika tetsy ambony ary holazaina etsy ambany, misy zavatra iray izay tena ilainao ilana toro-hevitra - ny fiainana bateria.Na dia manome toky ny fiainana bateria mafy aza i Apple, rehefa lava be ity andro ity ary tsy manam-potoana handoavana vola fa mila ny AirPods mandritra ny andro dia ho sosotra ny raharaha raha maty eo afovoany ny AirPods.
Nandre anao izahay! Raha tsy olona iray izay mila ny AirPods miaraka foana ianao dia afaka mampiasa AirPod iray isaky ny mandeha ary avelao ny iray hafa hiala sasatra ary hitandrina ny fiampangany.Vita tamin'ilay voalohany, tohanana daholo ianareo. Moa tsy toe-javatra mandresy? Azonao atao ny mampiasa ny AirPods in-droa ny ainy bateria amin'ny fiampangana iray monja.
14. Avelao ianao AirPods hamaky ny hafatrao ho anao
Raha afaka mametaka anao amin'ny hafatra vaovao rehetra ny AirPods dia maninona raha avela hamaky azy io ho anao koa, ary manapaha hevitra raha ilaina ny manapaka ny fifantohanao sy mamaly.Mba hahatonga ny AirPods anao hanao izany dia kitiho ny toe-javatra amin'ny telefaona> Siri & karoka> fanambarana hafatra. Azonao atao koa ny misafidy izay hafatra hovakinao. Raha ny ankehitriny, ny safidy dia - Favorites, Recent, Contacts, na ny olon-drehetra.
Raha mamaly ny hafatra amin'ny alàlan'ny Siri ianao dia hamaky indray ny AirPods izay navalinao azy. Ary raha sosotra amin'ity zava-misy ity ianao dia afaka manova ity toe-javatra ity ihany koa amin'ny alàlan'ny fandehanana any amin'ny toeran'ny telefaona> tsindrio ny fampandrenesana> safidio ny hafatra ambarao> ankehitriny tsindrio ny safidy 'valio tsy misy fanamafisana'.
15. Azonao atao ny mampifandray ny AirPods amin'ny fitaovana Android anao koa
Tsy iDevices irery no fitaovana mifanentana amin'ny AirPods Pro. Azonao atao ny mampifandray azy ireo amin'ny fitaovana android anao koa. Ny tetika tonga lafatra ho an'ny mpampiasa android!
Ho fampifangaroana ny AirPods Pro anao, sokafy ny fikirana amin'ny telefaona> tsindrio ny fampiasa fitaovana vaovao> sokafy ny AirPod Pro anao hikambana> tsindrio ny 'confirmations pairing'.
Raha sanatria tsy miseho ao amin'ny lisitry ny fitaovana misy ny AirPods, kitiho ary tazomy ny bokotra eo an-damosin'ilay tranga mandra-pahazavain'ny jiro LED. Ankehitriny, ity dia tokony hametraka ny AirPods anao amin'ny pairing mode mba hahafahanao manambatra azy ireo mora izao.
16. Ny jiro LED eo alohan'ny raharaha
Raha sanatria ianao manontany tena hoe inona no dikan'ilay jiro LED kely eo alohan'ilay tranga famandrihana - indraindray fotsy, indraindray amber, azonao tsara izany avy eto.
Rehefa tsy misy jiro- ny bateria dia ritra daholo
Jiro amber raha AirPods no ao- Mandoa vola ny AirPods
Jiro amber rehefa tsy ao anatiny ny AirPods- ny casing charge dia manana haavon'ny bateria latsaky ny feno
Jiro maitso tsy misy Airpods ao- ny tranga fiampangana dia mihoatra ny 1 ny sisa tavela
Jiro fotsy manelatselatra- tafaverina ny AirPods
Jiro manjelanjelatra amber- Ny AirPods dia mety manana lesoka mety hitranga ary mila averina averina.
Raha ny AirPods Pro no misy ny jiro LED dia mampiseho ny saran'ny fiampangana ny AirPods ary raha tsy izany dia asehon'ny jiro LED amin'ny tranga ny fiampangana ny raharaha fiampangana.Tadidinao izany. Matoky anao izahay.
17. Ataovy miavaka ny anaran'ny AirPods Pro anao
Nahita ireo torohevitra rehetra ireo ianao mba hahatonga ny AirPods Pro ho anao manokana, miaraka amin'ny fanaingoana, fampiononana, fametrahana ilainao ilainao.Fa zavatra iray sisa, ny anarana mazava ho azy. Maninona raha ovaina ny anaran'ny AirPods Pro anao ary ataovy fenoinao tanteraka.Mandehana any amin'ny faritra misy ny iPhone-nao> tsindrio ny Bluetooth> kitiho ny kisary info AirPods misy eo> avereno jerena izao ny anarana.
Eny, mora izany.Ankehitriny ianao dia afaka mamantatra mora foana raha ny AirPods Pro no iray izay ampiarahina na an'ny olon-kafa. Na azonao atao ny mamantatra ny napetrakao rehefa misy andiany AirPod roa mifandray amin'ny telefaoninao.Omeo anarana izao izay tianao. Jereo ny hatsaranao koa.
18. Araho ianao AirPods Pro
Milaza aminay ve ianao fa marary koa ianao amin'ny fahaverezan'ny AirPods anao amin'ny fotoana rehetra ary avy eo ianao koa mila manara-maso hatrany amin'ny làlan-kalehanao ary mamono ora iray amin'ity hadalana ity?Apple dia efa namaha ity olana ity ho anao ary holazainay aminao ny fomba.
Azonao atao ny manara-maso ny AirPods anao amin'ny alàlan'ny iPad / iPhone anao. Sokafy fotsiny ny fampiharana 'Find my' amin'ny iPhone / iPad> miditra amin'ny kaonty Apple> ampidiro ny AirPods Pro>. Ny sari-tany dia hanondro ny toerana misy ny AirPods Pro anao na raha very ny AirPods rehefa tsy nosoniavina izy ireo dia haneho ny teboka farany rehefa teo amin'ny Internet izy ireo.
19. Fizarana feo eo anelanelan'ny AirPod roa miaraka amina fitaovana iray
Tsarovy ny fomba taloha tany am-pianarana rehefa nandre hira misy sofina ianao ary mizara takelaka tokana miaraka amin'ny olon-tianao ary miara-misalahy amin'ilay hira ianareo roa.Io no kinova maoderina mitovy amin'izany. Midika fotsiny izahay amin'ny fizarana ny AirPod fa tsy ny hevitra!
Izao sisa no hataonao dia ny mampifandray ny AirPods Pro amin'ny iPhone na fitaovana iOS hafa> tsindrio ny kisary AirPlay> tsindrio ny bokotra fizarana feo> ary tazomy ny AirPods an'ny namanao raha misokatra eo akaikin'ny fitaovanao.
Miaraka amin'ireto toro-hevitra sy tetika 21 AirPods Pro ireto, dia vao nilaza taminay izahay fa ny fividiananao $ 250 dia toa azo antoka kokoa ho anao. Ireo hacks ireo dia tsy hahatonga anao ho milay fotsiny, hanome anao faratampony ireo sakaizanao mahay teknolojia fa hanamboatra ny AirPods Pro anao manokana araka izay ilainao manokana koa sy hanome anao ny fampiononana sy fahombiazana rehetra nampanantenain'i Apple taminao Fividianana AirPods Pro.
Ahoana ny fomba hamantarana ny AirPods sandoka Pro?
farany fanapahana pro hafa ho an'ny windows
jereo ny sarimihetsika maimaim-poana amin'ny Internet raha tsy misintona
sarimihetsika farany HD maimaim-poana amin'ny Internet
ranomasina afo 2 tsy voasakana
horonantsary netflix vs amazon prime